लोकमानविरुद्ध लड्ने ‘साहसी’ वकिल भन्छन्ः हजारौँ लोकमानहरु बाँकी छन्, तिनीहरुसँग लड्नुपर्छ - Dainik Nepal
लोकमानविरुद्ध लड्ने ‘साहसी’ वकिल भन्छन्ः हजारौँ लोकमानहरु बाँकी छन्, तिनीहरुसँग लड्नुपर्छ
दैनिक नेपाल २०७३ पुष २४ गते २३:००
आजको फैसलालाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
हामीले लोकमान सिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुन अयोग्य छन् भनेर हामीले जे दाबी गर्दै आएका थियौँ, त्यो कुरा आज सर्वोच्च अदालतले नै प्रमाणित गरियो ।
नियुक्तिका सन्दर्भमा दलका नेताहरुबाट जुन गल्ती भएको थियो, त्यो गल्तीलाई अदालतले पनि स्थापित गरिदिएको छ । आजको फैसलाले नेताहरुको अदुरदर्शिताको पनि पुष्टि भयो ।
सर्वोच्चले के–के फैसला गरेको हो ?
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख कार्कीको सन्दर्भमा दुईवटा फैसला गरेको छ । पहिलो त उनको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । त्यसको कारण चाँहि उनीमा उच्च नैतिक चरित्र छैन भन्ने हो । किनभने उनलाई रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेको थियो । र, त्यस बमोजिम विभागिय कारबाही सुरु भइरहेको अबस्थामा उनले राजीनामा दिएको हो ।
दोस्रो, अख्तियार प्रमुख बन्नका लागि उनको २० बर्षको विषयगत योग्यता पुग्दैन भन्ने कुरा अख्तियार फैसला गरेको छ ।
तपाईंले बडो जोखिम मोलेर उनीविरुद्ध उजुरी दिने साहस जुटाउनुभएको थियो, यो फैसला पछि महसुस कस्तो गर्नुभएको छ ?
खुसी नै लागेको छ । नियुक्तिको बेला जनस्तरबाटै विरोध भएको थियो । जनताले विरोध गर्दागर्दै पनि नेताहरुले उनलाई त्यो पदमा थोपरेका हुन् । लोकमानले आतंक नै सिर्जना गरेका थिए । लोकतन्त्र नै खतरामा थियो । तर, यसलाई निर्र्मुल गर्ने काममा न्यायपालिकाले श्रेय लिने अवस्था रह्यो । किनभने दलहरुको भूमिका अहिले पनि चित्तबुझ्दो रहेन । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि संसदबाट पनि उनीहरुले केही गर्न सकेनन् ।
यो फैसलाले आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
‘लोकमान’ एउटा प्रवृत्ति हो । ‘लोकमान प्रवृत्ति’को नाइके लोकमान सिंह कार्की हुन् । यो समाजमा, राज्यका विभिन्न निकायमा हजारौँ लोकमानहरु अहिले पनि विद्यमान छन् । यसकारण एक कदम सकारात्मक त हो यो । र, बाँकी चुनौतीहरु पनि उत्तिकै कठिन छन् । यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध समाजमा विभिन्न तहमा थुप्रै अभियानहरु भएका छन् । गोविन्द केसी अभियान त अन्य केही अभियानका नाममा । साना साना अर्थात टुक्रे अभियानहरु अब एकसाथ जोडिनुपर्छ । र, एकैठाउँमा जोडिएर यस्ता प्रवृत्तिलाई पराजित गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुतिः शारदा गैरे/दैनिक नेपाल
एमालेकै कर्मचारी नेता भन्छन्-लालबाबुले ‘थाङ्ने कर्मचारी’ भन्न पाउँदैनन्
गोकर्ण विष्टले एक्सन लिने हो भने सबै समाधान हुन्छ : किरणकिशोर घिमिरे
ठूला कर छलि प्रकरणका मुद्दाको फाइल फेरि खुल्छ : कानूनमन्त्री तामाङ (अन्तर्वार्ता)
किरण गुरुङ अहिलेसम्मकै ‘हाई प्रोफाइल’ प्रदेश मन्त्री (अन्तर्वार्तासहित)
महानिर्देशक भट्टको भ्रष्टाचारले खारेज हुँदै खानेपानी विभाग
नारायणगढ–मुग्लिन सडकको साँघुरो ठाउँमा रड एङ्करिङ गरिँदै
सरकारसँग के माग्यो विवेकशील साझा पार्टीले ?
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादबारे राजेन्द्र महतोको नयाँ टिप्पणीले राजपामा तरंग
प्रिया प्रकाशले दोस्रो पटक आँखा झिम्काएको भिडियो पनि भाइरल
आन्तरिक उडान सुरु, अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन ३ घण्टा लाग्ने
क्रसरले बनाएको कुलोमा डुबेर बालकको मृत्यु